Kedu ihe bụ nhazi nke resin mgbanwe anion
Resion mgbanwe anion na cation nwere usoro kwụsie ike. A na-akpachara anya mee ya ka ọ bụrụ netwọkụ, na-adịtụdịghị akụkụ atọ. Enwere polymer dị na ya, nke nwere ike ịbụ acid ma ọ bụ olulu mmiri. Naanị site n'iji polymerization kwekọrọ na nke a nwere ike rụpụta ezigbo ihe ...
Resin mgbanwe cation: ojiji na ndozi
N'ime usoro iji resin, ekwesịrị izere mmetọ nke ihe ndị a kwụsịtụrụ, ihe ndị sitere n'okike na mmanụ, yana ịzere oke ọxịdashọn nke ụfọdụ mmiri mkpofu na resin. Ya mere, a ga -ewepụrịrị ion metal dị arọ tupu mmiri ikuku na -ekpofu mmiri abanye na resin anion iji zere ọdachi ...